ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြား | NLD | Page 3
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ်အား အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်း
Posted By: mygate wayon: ဇှနျ 18, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၊ ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် “သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး အသိပညာပေးလှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်”အား (၁၉.၆.၂၀၁၉)ရက်နေ့တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိ...	Read more
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၄)နှစ်မြောက် မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ် စုပေါင်းသွေးလှူဒါန်းပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်း
Posted By: mygate wayon: ဇှနျ 17, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြား
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့မှ လူငယ်စည်းရုံးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပါတ်သတ်၍ အစည်းအဝေး ကျင်းပပြုလုပ်
Posted By: mygate wayon: မေ 28, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြား
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ မတ္တရာမြို့နယ် အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့၊ မတ္တရာမြို့နယ်လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ ရပ်ကျေးပ...	Read more
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ လူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့များ တွေ့ဆုံပွဲ ( မအူပင် ခရိုင် ) ကို ၂၈ . ၅ . ၂၀၁၉ ရက်နေ့၌ မအူပင်မြို့နယ်ရုံး တွင် ကျင်းပခဲ့ရာ တိုင်းလူငယ်လုပ်ငန်း အဖွဲ့ဝင်များ မအူပင်ခရိုင်လ...	Read more
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များမှ တာဝန်ခံများ (၂)လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကျင်းပ
Posted By: mygate wayon: မေ 25, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြား
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ ၂၅ ရက် ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့နှင့် တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များမှ တာဝန်ခံများ (၂)လ တစ်ကြိမ် ပုံမှန်အစည်းအဝေးကို ယနေ့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့...	Read more
Posted By: mygate wayon: ဧပွီ 24, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြားNo Comments
Posted By: mygate wayon: ဖေ‌ဖျောဝါရီ 11, 2019 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြားNo Comments
Posted By: mygate wayon: ဒီဇငျဘာ 21, 2018 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြားNo Comments
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 27, 2018 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြားNo Comments
Posted By: mygate wayon: နိုဝငျဘာ 26, 2018 In: ကျောမတီသတငျးမြား, ဗဟိုလူငယျလုပျငနျးအဖှဲ့သတငျးမြားNo Comments